Ndi igwe mara mma di nma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Amamiihe anyịnya igwe - otu esi edozi
Amamiihe anyịnya igwe - otu esi edozi
Ndi igwe mara mma di nma?
Na a nutshell, naAmamiihe Bikes AmamiiheBicycle Co-l-iszụ bụukwu. Imirikiti nyocha ya dị mma. Otu n'ime atụmatụ ya pụtara ìhèọ bụna-amali elu n'okporo ụzọ dị larịị ma ọ bụ nke nwere oghere. All ekele ya chromoly etiti na ndụdụ, nke na-igwe kwụ otu ebe na nwereukwuabsorption ujo.10.03.2021
anyị kwesịrị imezi ihe n'ihu brek iji jide n'aka na ọ na-arụ ọrụ, dị ka m na-adịghị a igwe kwụ otu ebe ọkachamara, M nwere ike ikwu nwa m nwoke ka igwe kwụ otu ebe ka a gbaara ezi àmà ụlọ ahịa kwa iji jide n'aka na brekị na-ọma gbanwee ugbu a, ọzọ nnyefe nhọrọ ha na-enye oku velophix home nnyefe ihu ọma a gbaara akara na-arụ ụgbọ ga-professionally kpọkọta igwe kwụ otu ebe maka 100 nwekwara amamiihe nwere atọ dị iche iche ụdị ịhọrọ site na nwa m nwetara Cooper nlereanya naanị 400 dollar nke bụ n'ezie ọjọọ n'ihi na àgwà nke bike amamiihe nwere na kwa L-ụgbọ okporo ihe nlere nke nwere uzo asaa maka njem ndi ozo kariri, nke ato bu ihe ndi Carmen nke nwere uzo ato na ihe karia Ihe eji eme ka nkasi obi karie ike nke taya nke anyi nwere, igwe kwụ otu ebe di nma ma na-agba nke ọma Nwa m nwoke họọrọ agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ The Cooper Ihe nlere anya na uzo ato bu ihe eji emeputa ihe mbu maka uzo ugwu 2 bu uzo mbu maka ala di ala na gia 3 kwesiri inweta karia ngwa ngwa igwe kwụ otu ebe dị ihe dịka 25-27 pound Anyị nwalere igwe kwụ otu ebe na ọ f ọmarịcha oche Ahụ na-adị mma na m nwere igwefoto Dji Osmo Pocket eji edekọ isiokwu mgbe ị na-anya ụgbọala enwere m olileanya na ị nwere mmasị na nyocha a, ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a biko pịa Idenye aha na Dị ka bọtịnụ pịa bọtịnụ mgbịrịgba dị n'okpuru iji mee ka ị mara ndị ọhụrụ A ga-amara gị ọkwa n'akwụkwọ. Bugote isiokwu ọhụrụ otu ugboro n’izu
Ebee ka a na-eme igwe igwe na-egbuke egbuke?
Ego ole ka ezigbo ụgbọ oloko L dị arọ?
AmamiiheA na-eji aka arụ ọrụ igwe na ụlọ ọrụ ọkaibe, ikuku na-arụ ọrụ na Taiwan. Anyị gbara mbọ dị ukwuu ịchọta ndị mmekọ n'ichepụta ọrụ gbadoro ụkwụ n'ọrụ ọma.
Kedu afọ dị mma maka?
N'ikwu okwu n'ozuzu, a haziri usoro ọmụmụ anyị iji mee ka mgbakọ na mwepụ, sayensị, na sayensị kọmputa na-atọ ụtọ na mmekọrịta maka ndị mmadụafọ10 ruo 110. Nke ahụ kwuru, anyị chọrọ ka ị bụrụ 13 ma ọ bụ karịa iji nwee akaụntụ gị.
SciShow Space na-akwado Brilliant.org. Otu ihe ndị mmadụ enweghị ike ịkwụsị ime bụ ịchọpụta ebe anyị siri bịa na ihe kpatara anyị ji dị ndụ.
Nke ahụ bụ nnukwu ihe anyị isiokwu maka ọwa ọzọ. Ndị ọkà ihe ọmụma na ndị na-esi nri n’ọkụ ka na-arụ ọrụ na ajụjụ ndị a, mana sayensị nwere ike ọ dịkarịa ala ịza otu ihe: mgbe ụwa malitere. Ma ugbu a, anyị nwere obi ike na ọ ga-adị tupu ihe dị ka 13, The Big Bang mere 8 ijeri afọ gara aga.
Ọ dịrịghị anyị mfe ịchọpụta, atụmatụ anyị nwere ike ịka mma, mana ekele maka ụfọdụ ngwa ọrụ bara uru yana ọtụtụ mgbakọ na mwepụ, anyị amalitela ezigbo mma. Iji gbakọọ afọ ole eluigwe na ala dị, ndị na-enyocha mbara igwe na-eji ihe abụọ bụ́ isi ma ọ bụ ihe àmà. Nke mbụ mara mma: ị na-achọ ihe ochie.
Ọtụtụ mgbe, nke a pụtara na ha na-ele ihe anya dị ezigbo anya. See hụgoro, eluigwe na ụwa na-agbasa kemgbe Big Bang, yabụ ihe ndị kacha ochie esila n’ụwa kemgbe ọtụtụ ijeri afọ. Ma dabere n’otú ihe dịruru, ndị na-enyocha mbara igwe nwere ike ịmata ụdị afọ ọ dị.
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-eme nchọpụta enweela ike iji foto dịka nke Hubble Space Telescope mata ụyọkọ kpakpando dị ka ijeri afọ 13.2! Ma ha amaghi na kpakpando ndi ochie bu nani site n’ile ha anya. Iji chọpụta, ị ga-atụle ụfọdụ n'ime ụzọ dị jụụ, dị egwu na ọkụ na-akpa agwa.
Lee ka eluigwe na ala si agbasa, ọ na-agbasapụkwa ebili mmiri nke ìhè nke na-agagharị na ya. Ya mere, mgbe kpakpando na-apụ na Earthwa, a na-agbatị ọkụ ya ma nwee ogologo ogologo ogologo ruo mgbe ọ bịakwutere anyị. A maara nke a dị ka uhie.
Site n’ịhụ etu esiri kpakpando gbasaa, ma ọ bụ gbanwee, ma jiri obere mgbakọ na mwepụ, ndị na-enyocha mbara igwe nwere ike ịmata oke otu kpakpando dịruru na afọ ole. Mana nke ahụ abụghị naanị ngwaọrụ ha na-eji n'ihi na ebe anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe ndị dị anya, ndị ọzọ ka na-esiri ike ịlele oke anya ndị ahụ. Ọtụtụ oge, nke a na-agwa anyị na mahadum ga-enwerịrị opekata mpe ijeri 13.2.
Iji mee ka atụmatụ ahụ dịkwuo mma, ndị na-enyocha mbara igwe na-ejikwa ihe ọ̀tụ̀tụ̀ nke mgbasawanye mbara igwe n’onwe ya. Anyị maara na eluigwe na ala na-agbasa kemgbe mbubreyo 1920s, mana ịghọta etu o si agbasa bara uru ọ kachasị. Mara etu ọ na - agbasa ngwa ngwa na - eme, na otu etu ọsọ ahụ si agbanwe, na - enye ndị na - eme nchọpụta ohere ịrụ ọrụ azụ site ugbu a gawa ịchọpụta mgbe ụwa niile dị obere mkpụrụ ihe niile.
Ọ dị ka otu onye sayensị na-ahụ maka ọdịnihu na-enyocha saịtị nke mgbawa ahụ wee gwa gị mgbe bọmbụ ahụ gbawara. N'okwu a, ọ bụ naanị na bọmbụ ka ukwuu. Nchọpụta abụọ dị mkpa nyeere anyị aka ịghọta mgbasawanye a.
hiit maka ntachi obi
Nke mbu bu Type Ia supernovae, nke na-ebili site na mgbawa nke obere kpakpando dwarf kpakpando na onye ozo di egwu. N’afọ 2011, otu ndị sayensị natara onyinye n ’Nobel maka iji ha gosi na eluigwe na ụwa na-agbasa ngwa ngwa. Ndị a supernovae na-enwusike ike ma nchapụta ha n’adịghị mma. otu n’ime ha ga-adị ka ibe ya.
Nke ahụ na-eme ka ha dị mma maka ịgbakọ ebe dị anya, ma ọ bụ ihe ndị na-agụ kpakpando na-akpọ kandụl ọkọlọtọ. Ebe ọ bụ na anyị maara ihe nchapụta ha kwesịrị ịnọ na anya, ọ bụrụ na ọ gafere otu nde nde ijeri ma ọ bụ ijeri afọ, ha dị mfe iji maka nha. Mgbe ọtụtụ afọ nyochachara, ndị na-enyocha mbara igwe chọpụtara na ihe ndị na-acha uhie uhie maka ihe ndị a dị oke ala karịa ka ọ gaara adị maka ụyọkọ kpakpando ndị dị anya.
Nke a pụtara na n’otu oge mgbe supernovae gafere ọkụ ha, ha agala n’ihu n’ụwa karịa etu ha tụrụ anya ya. Nke a nwere ike ịkọwa naanị site na mbara igwe nke na-agbasa ngwa ngwa karịa afọ, ọ bụ ezie na anyị ejighị n'aka ihe na-akpata ya. Mana o nyeere anyị aka ịghọta mgbe nnukwu nsogbu ahụ mere.
Tupu anyị amata na eluigwe na ala na-agbasa, anyị ngụkọta oge gbasara afọ ya nwere ike bụrụ ezighi ezi. Ndị na-agụ kpakpando na-echekarị na mgbasawanye, yabụ ọ bụrụ na ị rụghachi azụ azụ site na usoro anyị dị ugbu a ị ga-enweta eluigwe na ala nke pere mpe. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịhọrọ kandụl na-adịghị mma, ị ga-enweta nha na-ezighi ezi.
Dịka ọmụmaatụ, nhazi mbụ nke Hubble site na 1920s jiri ụdị kpakpando a na-akpọ Cepheid agbanwe dị ka kandụl ọkọlọtọ, na-atụ aro na eluigwe na ụwa dị ihe dị ka ijeri afọ 2. Nke doro anya na ọ bụghị eziokwu. Sayensị bụ usoro.
N'agbanyeghị nke ahụ, Type Ia supernovae abụghị naanị ụzọ anyị si mụọ etu ụwa niile si agbasa. Otherzọ ọzọ anyị si chọpụta ọnụọgụ nke mmeba a bụ na Cosmic MicrowaveBackground, ma ọ bụ CMB, ọkụ na-enwusi ike nke sitere na Big Bang Well, ọ bụghị ume ọkụ ọkụ, ọ bụ 2.7 Kelvin, ma ọ bụ ihe dịka -270 Celsius.
Ma ọ bụghị 2.7 Kelvin ebe niile! Nke ahụ baara anyị uru nke ukwuu! Mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ ndị a nwere ike ime ka anyị gafere na Movement nke ihe na njupụta nke gas na mbara igwe, a na-eji ha abụọ agbakọ ọsọ nke mgbasawanye nke ụwa. Na ya na ty z.
B. Supernovae, ihe ọmụmụ ndị a enyela anyị ohere ịmatakwu banyere etu igwe n’elu ụwa si tolite kemgbe mmalite ya. Nke a na-enye anyị ohere ịtọ atụmatụ afọ anyị dị ugbu a nke ijeri afọ 13.8 na efu.
Ihe anyị kwuru ga-akawanye mma site ugbu a gawa! Anyị chere na ijeri 13.8 dị ezigbo mma, mana ya ejula gị anya ịnụ na ọnụọgụ a na-agbanwe obere mgbe anyị mere nyocha ka mma, ọ pụtara na anyị na-akawanye mma na sayensị. N'ikwu okwu banyere CMB, Brilliant.org nwere ihe mmụta na ngalaba mbara igwe ha nke na-ekpuchikwu ihe ihe radieshon a kụziiri ndị ọkà mmụta sayensị banyere eluigwe na ala.
Ọ na-atọ ụtọ n’ezie n’ihi na ajụjụ ọ bụla na-eme ka ị bụrụ onye na-eweta nsogbu n’ime nsogbu. Ka anyị hụ ma anyị mụtara ihe ọ bụla na ihe niile m bụ naanị m na-agwa gị banyere ya. Aga m na-ajụ ajụjụ ebe a na studio, ma Brilliant.org na-etinye a njikọ elu otú i nwere ike nwalee gị ihe ọmụma n'ụlọ free.
You nwere ike ịchọta ya na brilliant.org/SciShowSpaceCosmology Dị ka ajụjụ niile eji eme ihe, nke a na-amalite site na ịmatakwu ozi banyere nsogbu ndị a. Ajụjụ a na-amalite site na ịkọwa CMB na obere nkọwa zuru ezu tupu anyị anwa anwa ịza ajụjụ.
Otu ihe m hụrụ n'anya gbasara Amamiihe bụ na ọ bụghị naanị ederede dabere na ị na-arụ ọrụ, ị nwere onyonyo dị ịtụnanya dị ka kaadị a. Ọ bụghị naanị na ha na-enyere m aka ịghọta nsogbu m na-achọ idozi, mana ha na-enyekwa ihe niile ha na-ekwu maka ajụjụ a, nke ahụ na-enyere m aka ịghọta ya nke ọma, kamakwa na-edebe ozi ahụ ogologo oge ma nwee obi ụtọ ịbụ n'elu ya. Ya mere lelee ajụjụ ahụ maka onwe gị ma mee ka anyị mara otu ị si eme na ihe ndị a.
Ajụjụ a bụ n'efu maka igwu egwu, ya mere na-arịa ọrịa ya. Na 200 mbụ ndị debanyere aha na brilliant.org/scishowspace na-enweta ego 20% na ndenye aha ha na-akwụ ụgwọ kwa afọ ma na-akwado SciShow Space, yabụ na-ekele gị nke ukwuu!
Kedu ụgbọ oloko kachasị arọ n'ụwa?
NA JUNE 21 BHP Ogwè ore setịpụrụ ọhụrụụwandekọ site na ịgba ọsọ kachasị ogologo nanke kasiibuụgbọ oloko, n’agbata Yandi mine na Port Hedland na mpaghara Pilbara nke Western Australia (n’okpuru).
Kedu otu ụgbọ oloko ibu zuru ezu?
Ego ole ka aụgbọ okporo ígwètụọ? Nke aụgbọ olokoga-eru ihe dịka 19,188 tọn (42,328,754 lbs), n’ime nke 848 tọn (1,869,519 lbs) ga-abụ mkpokọtaibu ibulocomotives na tọn 18,340 (40,432,778 lbs) na ngụkọtaibu ibuiheeburuụgbọ ala hopper.
Ogologo oge ole ka m kwesịrị iji amamiihe akpụkpọ rejuvenating set?
Jiriugboro abụọ kwa ụbọchị maka ọnwa 1. Bidoghachi ọgwụgwọ mgbe otu ọnwa zuru ike.Jul 9 Dec 2019
Kedu ụgbọ okporo ígwè kachasị ogologo na US?
California Zephyr bụụgbọ okporo ígwè kachasị ogologo na USma gafere n’Ugwu Rocky, ndagwurugwu Colorado, na Sierra Nevada.Ọgọst 28 2018
Gini mere ejizi cabooses?
.B.kaboosebụ ụgbọ ala ụgbọ okporo ígwè North America jikọtara ọnụ na njedebe nke ụgbọ oloko ibu. Mmepe na nyocha na nchekwa teknụzụ, dịka ndị nchọpụta ntụpọ ahịrị na ngwụcha ụgbọ oloko, mere ka mbelata ndị ọrụ na mbupu nkekabooseụgbọ ala.
Tragbọ oloko ibu na-abawanye?
N’agbanyeghi na enweghi otutuụgbọ oloko ogologoịnyagharịibuUsoro okporo ụzọ 'ụbọchị ndị a - pasent 95 dị mkpụmkpụ karịa ụkwụ 10,000, dị ka Association of American Railroads - Class si dị ogologoụgbọ olokonwa oge. “Ratingrụ ọrụụgbọ oloko ogologona mbaụgbọ okporo ígwènetwọk abụghị ihe ọhụrụ.
Ugboro ole nyocha dị maka igwe kwụ otu ebe?
Nyocha 5,997 dabara na ọchụchọ gị. Tọgharia nzacha. Na-ele anya maka ihe igwe kwụ otu ebe, Bikes na-egbuke egbuke nwere ha na ngwaahịa, yabụ nye iwu otu ma nyefee ya n'echi ya, enwere ntụkwasị obi ma nwee ike ịtụ ahịa ọzọ. Aha m bụ althea serrano.ill mee nke a…
Ọmarịcha Bike Co L na-eme ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Na a nutshell, na Amamiihe Bikes Amamiihe Bicycle Co-l-Train dị ukwuu. Imirikiti nyocha ya dị mma. Otu n’ime atụmatụ ya pụtara ìhè bụ na ọ na-efegharị n’elu okporo ụzọ dị larịị ma ọ bụ nke nwere olulu. All ekele ya chromoly etiti na ndụdụ, nke na-bike kwụ ọtọ ma na-enwe oké ujo absorption.
Gịnị bụ agba nke amamiihe igwe kwụ otu ebe?
Minimalists na Devid agụghị ndị gbara ndị hụrụ ga-n'anya kpochapụwo anya nke Amamiihe Bikes Amamiihe Bicycle Co-l-Train. Ọ dị na agba agba abụọ: Hudson Blue (nke sitere na Osimiri Hudson) na Subway Gray (ịsọpụrụ ụgbọ oloko ahụ).